ကိုယ်နံ့ဆိုးတဲ့ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ - Hello Sayarwon
ကိုယ်နံ့ဆိုးဆိုးထွက်ရခြင်းရဲ့ အဓိကတရားခံကတော့ သင့်ချွေးထဲမှာပါတဲ့ အက်ဆစ်ဓါတ်တွေကို ဖြိုခွဲနိုင်တဲ့ သင့်အရေပြားပေါ်က ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အရေပြားအတွင်းလွှာနဲ့ အဆီပြင်ကြားက ချွေးဂလင်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့ အပျိုဖော်၊ လူပျိုဖော်ဝင်စအရွယ်မှာ ကိုယ်နံ့ထွက်တာကို စတင်ရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်။ ဒီဂလင်းတွေကထွက်တဲ့ ချွေးဟာ ဖြိုခွဲရလွယ်ကူပြီး အမျိုးသမီးတွေထက်စာရင် အမျိုးသားတွေက ချွေးပိုထွက်တဲ့အတွက် ကိုယ်နံ့ပိုထွက်လေ့ရှိပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေက ကိုယ်နံ့ဆိုးဆိုး ထွက်စေသလဲ
ဆေးဝါးများ (ဥပမာ စိတ်ကျဝေဒနာ သက်သာဆေး)
ရောဂါများ (ဥပမာ သွေးချိုဆီးချို ဝေဒနာရှင်များ၏ ခန္ဓါကိုယ်မှ သစ်သီးနံ့ထွက်တတ်ပြီး၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ရှိသူများမှာ အရောင်ချွတ်ဆေးကဲ့သို့ ကိုယ်နံ့ထွက်တတ်ပါတယ်)
ချွေးထွက်ခြင်းဟာ ဘယ်အချိန်မှာ စိတ်ပူစရာ ဖြစ်လာမလဲ
Hyperhidrosis လို့ခေါ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ပုံမှန်ထက် ချွေးထွက်လွန်ကဲခြင်း၊ ခြေဆီထွက်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အချို့သော ရှုးဖိနပ်တွေ၊ ခြေအိတ်တွေဟာ ခန္ဓါကိုယ်ကထွက်လာတဲ့ ချွေးကို လွယ်လွယ်အငွေ့မပြန်နိုင်ဘဲ စုပ်ယူလိုက်တဲ့အတွက် ဘက်တီးရီးယားတွေ ခိုအောင်းရာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖြစ်လာစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင်ဟာ မကြာခဏဆိုသလို ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ချွေးထွက်မယ်၊ သင့်ကိုယ်နံ့က ပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုရင် တတ်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အထက်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ ချွေးနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကြောင့် ကိုယ်နံ့ဆိုးထွက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ အရေပြားဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ခြင်း၊ ချိုင်းနှစ်ဖက်ကို သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် ဂရုစိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်နံ့ဆိုးထွက်တဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
အနည်းဆုံး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ရေချိုးပါ
သင့်ခန္ဓါကိုယ်ကို အထူးသဖြင့် ချွေးဂလင်းတွေ အမြောက်အများရှိတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်းထားဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်အနှံ့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင် ရေပုံမှန်ချိုးပေးခြင်းအားဖြင့် ချွေးနဲ့ ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးသေစေတဲ့ ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာ အသုံးပြုပါ
ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတွေ သေစေအောင် အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ်တိုက်ဆပ်ပြာတစ်မျိုးမျိုးကို ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
ရေချိုးပြီးတဲ့အခါတိုင်း သင့်ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံးကို အထူးသဖြင့် ချွေးထွက်များတဲ့နေရာတွေကို ခြောက်သွေ့အောင် တံဘက်နဲ့ သေသေချာချာ သုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဟာ ခြောက်သွေ့တဲ့အရေပြားပေါ်မှာ ကောင်းကောင်းမရှင်သန်နိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်နံ့သင်းစေတဲ့ ပစ္စည်းကောင်းကောင်း အသုံးပြုပါ
အလူမီနီယမ်ကလိုရိုဒ် ခေါ် ချွေးထွက်နည်းစေတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတစ်မျိုးနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ ခန္ဓါကိုယ်ကထွက်တဲ့ ကိုယ်နံ့ဆိုးတွေကို ဖုံးသွားစေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ချွေးထွက်ခြင်းအပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိဘဲ အပေါ်ယံကိုယ်နံ့ကို ဖုံးအုပ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေကို ဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပေမယ့် သင့်အတွက် အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ သင်နဲ့သင့်တော်မယ့် အမျိုးအစားတစ်ခုခု ညွှန်းပေးဖို့ သင့်ဆရာဝန်ကို ပြောပြတာ ပိုအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်နံ့သင်းစေတဲ့ပစ္စည်းကို နံနက်တစ်ကြိမ်၊ ညနေတစ်ကြိမ်၊ အနည်းဆုံး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေ ပုံမှန်လဲလှယ် ဝတ်ဆင်ခြင်းဟာ ကိုယ်နံ့ဆိုးထွက်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ ခြေဆီထွက်တတ်တယ်ဆိုရင် ခြေအိပ်တွေကိုပါ မမေ့မလျော့ လဲလှယ်ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ခြေအိပ်ထဲကို ကိုယ်လိမ်းပေါင်ဒါ ဖြူးပေးခြင်းဖြင့်လည်း ခြေဆီနံ့ကို ဖုံးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်စီးဖိနပ်တွေအပြင် အိမ်တွင်းစီးဖိနပ်တွေကိုလည်း မကြာခဏ လဲလှယ်စီးပါ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် အိမ်ထဲမှာ ခြေဗလာနဲ့နေတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
odour/Pages/Introduction.aspx. Accessed May
treatments/reduce-body- odor. Accessed May 7,